Pattern Lock မေ့နေသူများအတွက် Factory Reset မချဘဲ Pattern Lock ဖြုတ်နည်း – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Published On: Fri, Aug 24th, 2012 Android Tutorials / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By သက်နိုင်စိုး Pattern Lock မေ့နေသူများအတွက် Factory Reset မချဘဲ Pattern Lock ဖြုတ်နည်း
Tags Shareပို့စ်ရေးသားသူ- ကိုစိုးဝင်း (Mobile Star)
About The Author- မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူများနဲ့ ဆော့ဝဲဆားဗစ်လုပ်ကိုင်နေသူများ အစဉ်ပြေစေဖို့ အလို့ ငှာ ယခု ပို့စ်ကိုရေးသားထားသူ ကိုစိုးဝင်းမှ Pattern Lock Remove Post ကို Myanmar Mobiel Application Store တွင်တင်လိုက်သည်။
ဒီနည်းလမ်းကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက် Pattern Lock ကျနေသောဖုန်းသည် Root လုပ်ထားသောဖုန်းဖြစ်ရမည် ။ USB Debugging On ထားခဲ့သောဖုန်းဖြစ်ရမည်။
အရင်ဆုံး ဒါလေး အရင်ဒေါင်းပါ – http://www.mediafire.com/?t09z9o9nea07ao4
ဒေါင်းပြီးရင်တော့ သင့်တော်ရာနေရာမှာ ဖြည်ထုတ်ပါ .
ဖြည်ထုတ်လို့ ပြီးတဲ့ Folder ထဲဝင်ပြီး လွတ်တဲ့တစ်နေရာရာမှာ SHIFT + RIGHT-CLICK နှိပ်ပြီး ၊ Open Command Window Here ဆိုတဲ့စာသားကို ရွေးပြီး Click လိုက်ပါ
Command Window တက်လာပါလိမ့်မယ် .
Pattern Lock ကျနေတဲ့ ဖုန်းကို ပါဝါဖွင့်လျက်ထားပြီး ကွန်ပျုတာနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ .
အောက်မှာပေးထားတဲ့ command တွေကို copy ကူးပြီး Command Window ထဲမှာ Paste လုပ်ပါ . ပြီးရင် Enter ခေါက်ပေးပါ
အဲဒါပြီးရင်တော့ စက်ကို Reboot လုပ်လိုက်ပါ .
စက်ပြန်တက်လာအောင်စောင့်ပေးပါ . တက်လာပြီဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းမှာ Pattern Lock က မပြုတ်ပဲ ကျန်နေပါလိမ့်ဦးမယ် . အဲဒီအတွက် နောက်ထပ် Command တစ်ကြောင်းထပ်ရိုက်ပေးရပါဦးမယ်
အောက်မှာပေးထားတဲ့ စာကြောင်း ရိုက်ပြီးသွားရင်တော့ စက်ကို reboot လုပ်စရာမလိုတော့ပါ .
သင့် ဖုန်းရဲ့ Pattern Lock ကို စိတ်ထင်သလို ဆွဲကြည့်ပါ ။ Pattern Lock ပြုတ်သွားပြီကိုတွေ့ရပါမယ်။
9 comments on “Pattern Lock မေ့နေသူများအတွက် Factory Reset မချဘဲ Pattern Lock ဖြုတ်နည်း”	ngwelamin on November 2, 2012 at 6:49 am said:
အကိုေ၇ downloads လင့်ကသေနေပြီ။ကူညီပါအုံး။ကျွန်တော်ဖုံးlock ကျနေလို.ပါ။
Reply ↓	kyawko on November 6, 2012 at 3:47 am said:
download link ထပ်ပေးပါအုန်း အကိုရေ
Reply ↓	winkyaw on November 10, 2012 at 8:13 am said:
အကိုရေ root မရှိဘူး pattern lock ကို ဘယ်ဖြည်ရမလဲ ပြောပေးပါအုံး ဖုန်းက i5500 Sansung ပါ
Reply ↓	Emc VoDa Kar on December 6, 2012 at 1:34 am said:
Link သေနေပါတယ် တစ်ချက်လောက် အရေးကြီးလို့ပါ ကူညီပါဦး
Reply ↓	zaygyi13 on December 29, 2012 at 9:26 pm said:
Reply ↓	nyinyi on January 3, 2013 at 6:27 am said:
Reply ↓	casper on March 17, 2013 at 10:31 am said:
Pattern lock lote tae link lay pyan lo chin lo par
Reply ↓	shwelu on April 4, 2013 at 7:27 am said:
ADB share by soewin
Reply ↓	JojOe (KOThu) on April 4, 2013 at 7:48 am said:
myominnthant on Samsung galaxy S3(GTI9300) သမားများအတွက် 4.2.2 official jellybean leaked firmware ထွက်ရှိလာပါပြီ..ko su yee on Sony Xperia SP ကို JellyBean (Android V4.1.2) တင်၍ Root လုပ်နည်းNay Min on Need for SpeedTM Hot Pursuit HD for Androidchitumg on Friendcaster Pro v5.4 for android(latest version)minswe on Friendcaster Pro v5.4 for android(latest version) Android Development